Telma: mandeha tsara ny tambajotra internety | NewsMada
Telma: mandeha tsara ny tambajotra internety
Misy fikorontanany ny tambajotra internety any amin’ny ranomasimbe Indianina. Milaza ny orinasa maorisianina Mauritius Telecom, fa misy asa atao any anaty ranomasina any amin’ny fari-dranomasina Nyali any Kenya. Tsy voakasik’izany kosa ny Telma.
Nanomboka ny alatsinainy 10 janoary 2022 teo ny asa fanamboarana anaty ranomasina, amin’ny tambajotra fibre optique Lower Indian ocean network (Lion/Lion2). Hiantraika any amin’ireo orinasa samihafa, mpikambana ny vondrona Lion/Lion2 izany ka mety hisy ny fikorontanana na koa mety ho miadana ny tosiky ny tambajotra.
Manoloana izany, manome antoka ny mpanjifany ny orinasa Telma, fa izy ireo no miantoka ny fampandehanana ny internet amin’ny alalan’ny Eassy any Toliara sy ny Metiss any Taolagnaro satria tsy afaka miasa ny Lion ampiasain’ny Orange. Araka ny fanadihadiana nataon’ny orinasa Speedchecker teto Madagasikara ny oktobra sy novambra 2021 teo, misongadina sady mifanalavitra ny tolotry ny Telma mihoatra amin’ireo orinasa hafa amin’ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara.
Avo telo heny ny tanjaka
Ny Telma no miparitaka indrindra manerana ny Nosy, any amin’ny 85%-n’ny toerana tena lavitra, raha oharina amin’ireo orinasa roa hafa, sady mbola manana tanjaka tambajotra internety ambony. Avo telo heny ny tanjaky ny tambajotrany mihoatra amin’ireo orinasa hafa.
Nahatratra 73 tapitrisa dolara ny fampiasam-bolan’ny Telma ho an’ny fotodrafitrasa, ny taona 2020 ka isan’ny tena nandaniam-bola ny fametrahana taribim-pifandraisana fibre optique any ambany ranomasina. Araka ny fanadihadian’ny Speedchecker ihany, mitana ny laharana fahafito ny Telma aty Afrika amin’ny hafainganam-pandehan’ny lafiny “téléchargement”.